Ny lalan’Andriantany izay miditra eo Ankadimbahoaka ka mivoaka eny Ankorondrano, dia mampitohy ny lalana Andrefan’ny Mananjary, la réunion kely ary Manarintsoa Isotry (Afovoany, Atsinanana, Isotry). Ny zava-misy anefa dia tsara ho fantatra fa maro
Ny andraikitry ny Kaominina manoloana ny fisian’ny cyclone ary ireo fiomanana amin’ny fihavian’ny rivo-doza manaraka
Ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia mandray an-tanana hatrany ny fikarakarana ny tra-boina isaky ny boriboritany sy ny fokontany amin’ny voina izay mahazo azy nohon’ny fihavian’ny “cyclone”. Misy fiaraha-miasa matotra sy fifamatoarana eo amin’ny Departemanta
Fanampiana nataon’ny « cellule 3P » ny tra-boina nandritra ny fandalovan’ny rivo-doza «CHEDZA »
Nandalo fotoan-tsarotra tokoa ny nositsika nandritra ny fandalovan’ny rivo-doza CHEDZA ». Hita teto andrenivohitra fa betsaka ny zavatra simba. Tao ny namoy ny ainy ary aman’arivony ny tra-boina tsy manan-kialofana. Manoloana izany indrindra dia
Tatitra nataon’ireo mpamonjy voina nandritra ny fandalovan’ny rivo-doza Chedza teto Antananarivo
Nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ireo mpamonjy voina na ny CSP Corps des Sapeurs Pompiers nandritra ny fandalovan’ny rivo-doza Chedza teto Antananarivo. Maro ny takaitra izay navelan’io rivo-doza io : tao ny
Antananarivo : Alerte Jaune/ Loza Manambana
auteur janoary 14, 2015 Commentaires fermés
Noho ny rotsak’orana nisesisesy tato ho ato dia nisy fiakarana avokoa ireo renirano manodidina ny tanànan’Antananarivo, toy ny lakan-dranon’ Ikopa, Sisaony ary Imamba. Amin’izao fotoana izao dia tandindomin-doza isika na en « situation d’alerte
Fanaraha-maso ny asa anaty tsena sy fanentanana ireo mpivarotra
Mba tsy hisian’ny kolikoly sy ho fizotry ny asa amin’ny ara-dalàna ao an-tsena, dia nanomboka ny Asabotsy lasa teo ny fizahana sy fanentanana teny an-toerana nataon’ny kaominina Antananarivo. Natomboka teny Isotry izany ary mbola
Fanentanana ny mpivarotra amin’ny fampiasana Ticket électronique
Ho antsika mpivarotra ara-dalàna rehetra eto amin’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ! Takio mandrakariva ny ticket rehefa mandalo ny percepteur na ny mpitaky haban-tsena. Amin’izy ireny ihany no andoavana ny haban-tsena , ary marihana fa manana
Fanadiovana sy fandaminana ny tsena
auteur janoary 5, 2015 Commentaires fermés
Noho ny fisian’ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo mpivarotra eto Antananarivo Renivohitra, dia nanapa-kevitra ny Kaominina hanao ny fandaminana sy fanadiovana ny 05 janoary 2015. Asa niarahana tamin’ireo sampan-draharaha misahana ny tsena; ka
auteur desambra 29, 2014 Commentaires fermés
Ankizy maro no nameno ny tokontanin’ny Lapan’ny tananan’Antananarivo Renivohitra ny 23 desambra 2014. « Noelin’ny ankizy » izay no loha-hevitra nentin’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra niantsoana ny hetsika izay natao. Ankizy miisa 1500 latsaky ny 15